Sary nomena Koweït
Mbola manantena ny ho tafody an-tanindrazana ihany koa ireo tantsambo Malagasy miasa amin’ireo sambobe italiana MSC, tavela any Amerika sy Eoropa, izay efa iantohan’ny orinasa mpampiasa azy ireo ny fiaramanidina hodiany aty Madagasikara raha ankatoavina ny hidiran’izy ireo eto.
Misy ihany koa teratany Malagasy nitsabo tena any Inde no tavela any. Tokony hody an-tanindrazana tamin’ny 5 aprily, daty mampanan-kery ny tapakila eo ampelan-tanany tokony hiverenana an-tanindrazana saingy dilan’ny fe-potoana 19 marsa 2020, noferan’ny governemanta malagasy hikatonan’ny sisintany ho an’ny sidina ivelany rehetra. Lany vatsy, lany ny fanafody … mahatsiaro ho very an-tanin’olona izy ireo.
Maro ireo Malagasy any Eoraopa no tavela any ihany koa, izy rehetra dia manaiky ny fepetra rehetra na fitiliana na fanokana-monina rehefa tonga eto Madagasikara.
(Sary nomena Koweït)